Charles Perrault: taariikh nololeedka iyo sheekooyinka carruurta ugu fiican | Suugaanta hadda jirta
Charles Perrault: taariikh nololeedka iyo sheekooyinka carruurta ugu fiican
Lugaha Alberto | | Qorayaasha, Buugaag, Suugaanta
Charles Perrault waa qoraa horeyba uga mid ahaa caruurnimadeena, taariikhda, sheekada guud. Isaga ayaa ah qaar ka mid ah sheekooyinka carruurta ugu caansan uguna waqtiyada dheer, in kasta oo xaqiiqda qoraagan Faransiiska ahi had iyo jeer ku meeraysato waxyaabo badan oo ku saabsan boqortooyada iyo "dunida dhabta ah" marka loo eego khiyaali. Nolosha iyo shaqada Charles Perrault Kaliya maahan mid xiiso leh taariikh ahaan, laakiin sidoo kale marka laga hadlayo fahamka sixir weligiis beddelaya awoodda sheeko-qorista.
1 Charles Perrault: sheekeeye ka tirsan Maxkamadda
2 Charles Perrault: Sheekooyinkiisa Gaaban ee Ugu Fiican
2.1 Durmiente qurux badan
2.2 Hood Fudud Oo Yar
2.3 Garka Buluugga ah
2.4 Bisadda oo leh kabo
Charles Perrault: sheekeeye ka tirsan Maxkamadda
Charles Perrault wuxuu ku dhashay Janaayo 12, 1628 magaalada Paris, laabta qoys boorgeois ah oo aabahood uu ahaa garyaqaan ka tirsan baarlamaanka, kaas oo u ogolaaday inuu ku raaxeysto nolol mudnaan leh. Perrault wuxuu ku dhashay inta lagu guda jiro laba dhalasho oo mataanaheeda, François, uu dhintay lix bilood ka dib markuu adduunka yimid.
Sannadkii 1637 wuxuu galay Kulliyadda Beauvais, halkaas oo uu ku soo bandhigay xirfad weyn luqadaha dhintay. Sanadkii 1643 bilaabay barashada sharciga si loo raaco wadadii aabihiis iyo walaalkiis, Pierre, aruuriyaha guud iyo ilaaliyaha ugu weyn. Waana tan iyo yaraantiisii, Perrault wuxuu muujiyey karti weyn oo xagga waxbarashada ah, tanina waa tan ugu weyn ee mudnaanta u leh inta badan noloshiisa.
Sanadkii 1951 ayuu ka qalin jabiyay Ururka Qareenada seddex sano kadibna wuxuu sarkaal ka noqday nidaamka dowliga ah. Waxyaabihii ugu horreeyay ee uu soo kordhiyay, qoraagu wuxuu ka qaybqaatay abuuritaanka Akadeemiyadda Cilmiga iyo Akadeemiyadda Fanka. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo uu booskiisa ka joogo dhinaca siyaasadda iyo xiriirka uu la leeyahay farshaxanka, Perrault waligiis kama hor imaanin nidaamka, mana uusan bixin astaamo khiyaali ah oo sheekooyinkiisa ay ka dhalan doonaan sannado kadib Noloshiisu waxay ku koobnayd dhammaystirka shaqadiisa iyo maamuusidda King Louis XIV oo ah gabayo iyo wada hadallo, taas oo ku kasbatay inuu ku qanco meelaha sare iyo jagada xoghayaha Akadeemiyadda Faransiiska sanadkii 1663 ee ku hoos jirtay usha ilaalintiisa ugu weyn, Colbert, lataliyaha Louis XIV.
1665, wuxuu ka mid noqon lahaa saraakiisha boqortooyada. Sannadkii 1671 waxaa loo magacaabay Guddoomiyaha Akadeemiyadda oo wuxuu guursaday Marie Guichon, oo ay gabadhiisii ​​ugu horreysay u dhashay 1673. Isla sannadkaas waxaa loo magacaabay maktabadda akadeemiyadda. Wuxuu lahaa seddex caruur ah oo dheeri ah, wuxuu waayey xaaskiisa kadib dhalashadii ugu dambeysay, sanadkii 1678. Laba sano kadib, Perrault wuxuu ku qasbanaaday inuu u dhiibo booskiisa wiilka Colbert, daqiiqadaas oo calaamad u noqonaysa u wareegistiisa wajiga qoraaga caruurta oo magaciisu ugu weyn yahay. ahaa Qisooyin hore, oo sifiican loogu yaqaan Qisooyinka Hooyo Goose. In kasta oo ay qoreen sheekooyinkaas oo dhan 1683, haddana lama daabicin illaa 1697.
Sannadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa, Perrault wuxuu naftiisa u huray qorista waxyaabo aan fiicnayn oo ku saabsan boqortooyada, boqorka Sweden, Spain iyo gaar ahaan, Louis XIV. Wuxuu u hibeeyay gabayga El Qarnigii Luulyo kii weynaa, oo sababay buuq weyn ka dib daabicitaankiisii ​​1687.
Charles Perrault wuxuu ku dhintay May 16, 1703 magaalada Paris.
Charles Perrault: Sheekooyinkiisa Gaaban ee Ugu Fiican
In kasta oo qayb ka mid ah shaqadiisii ​​suugaaneed (oo ay ku jiraan 46 daabacaaddiisii ​​qoraalo kadib) uu ka hadlay boqorrada, Maxkamadda iyo xaaladda siyaasadeed, Sheekooyinka carruurta ee Perrault waxay ka koobnaayeen akhlaaqiyaad uu qoraagu u arkay inay lama huraan u yihiin xilliyadii qalalaasaha sida kuwii qarnigii XNUMXaad ee Faransiiska.
Ogres, fairies, bisadaha kabaha iyo amiiraddu waxay bilaabeen in lagu sawiro madaxiisa oo ay dhiirrigeliso sheekooyinka ku dhex wareegaya fasallada sare sida dhaxalka aftahannimo ee dalalka kale ee yurub iyo qaar kale oo qalaad. Dhanka kale, goobaha dhabta ah ee uu booqan jiray qoraagu, sida qalcaddii Ussé, qaybta Indre iyo Loire, waxay dhiirrigelin lahayd sheekooyinka sida Quruxda Hurdada.
Buugga uruuriyay qayb ka mid ah sheekooyinkaas ayaa cinwaan looga dhigay Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités oo cinwaankeedu yahay Contes de ma mère l'Oye daboolka dambe. Mugga wuxuu ka koobnaa sideed sheeko, tan ugu caansan Charles Perrault:
Durmiente qurux badan
Sheekada caanka ah ee Princess Aurora, oo lagu xukumay inay waligeed seexato ka dib markii lagu dhuftay dunmiiqa, waxay noqotay mid ka mid ah sheekooyinka ugu waqtiga yar taariikhda. Perrault ayaa sawiray quraafaad amiirad hurda Marka soo noqnoqoshada sheekooyinkii hore ee Iceland ama Isbaanishka waxayna ku dareen taabasho xeel dheer oo xeel dheer
Hood Fudud Oo Yar
Sheekada gabadha koofiyad guduudan gasho oo yey ku dhacday wadada guriga ayeeyadeed ayaa ka timid halyeey laga soo bilaabo waqtiyadii dhexe si loo calaamadeeyo faraqa u dhexeeya magaalada iyo kaynta. Perrault wuxuu cabudhiyay faahfaahinta ugu been abuurka badan (sida martiqaadka yey ee Little Red Riding Hood si uu u cuno haraadiga ayeeyadeed) oo uqalma anshax u ah dhammaan haweenka da'da yar markay tahay ka hortagga la kulanka shisheeyaha.
Garka Buluugga ah
Xisaabinta ugu yar ee sheeko xariirta sheekooyinka Perrault ayaa lagu xusay haweeney soo ogaatay meydka xaaskiisii ​​hore ee ninkeeda aqalo xun. In kasta oo taariikhda daarta weyn iyo sayga qarsoodiga ahi ay ka soo jeedaan isla quraafaadyadii Giriigga, haddana waxaa la rumaysan yahay in Perrault uu dhiirrigeliyey tirooyin sida gacan ku dhiigle Gilles de Rais, oo ahaa nin qarnigii XNUMXaad Breton caan ka ahaa.
Bisadda oo leh kabo
Bisadda wiilka milleriga ee dhaxal u siinaya dhammaan dhaxalkiisa markuu dhinto ka dib waxay noqoneysaa aasaaska sheekadan ugu qosolka badan ee fasiraaddeeda ay weli kor u qaadayso in ka badan hal dood. Qaarkood waxay ku tiirsan yihiin aragtida ah in bisadda bani-aadmiga ah ee ganacsiga maamusha ay cashar ka tahay maamulka ganacsiga, halka qaar kalena ay tilmaamayaan in xayawaanka la rujiyay ay tusaale u yihiin bani-aadamka dareenkiisa xayawaan.
Sheekooyin aan badnayn ayaa ka gudbay sida ugu badan ee waqtiga Cinderella, Gabadha dhalinyarada ah ee u adeegtay hooyadeed iyo laba gabdhood oo walaalo ah oo u ooman inay guursato amiir. Sheekadu waxay ka turjumaysay fikradda ugu da'da weyn adduunka: la dagaallanka wanaagga xumaha, oo ah mawduuc horey ugu jiray mid ka mid ah noocyadii ugu horreeyay ee sheeko ka timi Masar hore.
Thumbelina waxay ahayd tan ugu yar sideed caruur ah. Faa'iidada weyn ee u saamaxday inuu ku dhex dhuunto kabaha gogosha ee doonayay inuu dhammaantood cuno. Sarbeeb cabbirkaas ma go’aaminayo qiimaha aadamiga.
Labada sheeko ee kale ee buugga ku jiray waxay ahaayeen Carwooyinka iyo Riquet oo leh muraayad, wax ka yar la yaqaan. Dhanka kale, qayb ka mid ah sheekooyinka Hooyo Goose, ayaa lagu daray Maqaarka dameerka, mid kale oo Perrault ah oo cambaareeyay qaraabada isagoo u sheegaya sheekada boqor doonayay inuu guursado gabadhiisa.
Waa maxay sheekada aad ugu jeceshahay Charles Perrault?
Ma ogtahay kuwan 7 sheeko oo la akhriyo muddada tareenka dhulka hoostiisa mara?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Charles Perrault: taariikh nololeedka iyo sheekooyinka carruurta ugu fiican
Waad ogtahay daabacaadda guriga daabacaadda ee Edhasa, waxay ku fiican tahay uruurinta buugaagta QAASKA ee cajiibka ah
Maqaal wanaagsan, runtii waan ka helay. Waxaan ka wada fekerayaa, Quruxda Hurdada ayaa ah tan aan ugu jeclahay. Si fiican u hubi daabacaadda, waxaa jira noocyo kale (1951 / suss). Waxaan bilaabay inaan ku raaco, balooggaagu waa weyn yahay.
Suugaan aad u wanaagsan
Ku jawaab Daniela carmenn
Waad salaaman tahay, raali ahaw laakiin waxaa jira taariikh aad qalad ku gashay "Sanadkii 1951 ayuu ka qalin jabiyay Ururka Qareenada"
Qoraa aad u fiican, waa khasnad in lagu raaxeysto shaqooyinka titan noocan oo kale ah, iyo in fariintiisa ay tahay mid la jaanqaadi karta xaaladaha casriga ah waa astaamo muujinaya inuu ku riyaaqay aragti aad u wanaagsan. In kasta oo sheekooyinkooda badankood lumiyaan qayb ka mid ah waxyaabaha ku jira la-qabsashada filmographic, haddana waxay weli yihiin miisaan aan la soo koobi karin.
hello, sideen ku xusi karaa boggan fadlan, ma heli karo taariikhda la sameeyay….
Ku jawaab KADS
5 akhris aad u madow oo loogu talagalay Jimcaha Madow (ama Saxon Black Friday)
Rosa Montero, oo la siiyay Abaalmarinta Suugaanta Qaranka 2017